Hevitra MPANOHARIANA | Mey 2011 |
Â¡Viva la resistencia o la lecciÃ³n de Honduras
2011-05-29 @ 22:16 in Politika
¡No! usted está en el blog Jentilisa: Maharesaka Veto. Tsy diso bolongana mihitsy ianao fa tena ato amin'ny Maharesaka VETO. Roa taona! roa taona ny vahoaka Hondiorana no nitolona hiverenan'ny filoha naongana tamin'ny jona 2009 ary tafaverina an-tanindrazana indray amin'izao fotoana izao. Vaovao toa tsy tiana hivoaka loatra saingy manana ny lanjany ny ho an'ny firenena nisiana fanonganam-panjakana toy ny teto Madagasikara. Hamoaka lahatsary ho anareo ny mpanoratra hahitanareo ny fitoviana sy ny tsy fitoviana teto Madagasikara sy tany Honduras.
Atomboka amin'ny fiverenany tany an-tanindrazana tamin'ny faran'ity herinandro ity izany andian-dahatsary atolotra anareo izany.
Marihana fa efa nisy ny fotoana niverenany an-tsokosoko tany an-tanindrazany saingy henjakenjana ny toe-draharaha tamin'izay fotoana izay.
Nisy ihany ireo tafahoana taminy tao amin'ny ambasadin'i Brezila
Fantsom-baovao iray milaza ny zavamisy tadiavina ampanginina
Ilay filoha tsy fidiny nilaza fa manao fampihorohoroana ny haino aman-jery roa.
Andian-tsaripika sy hiram-piaretana iray tany Honduras somary niverimberina
Hira iray hafa tamin'ny andro faha-77 nanaovana ny fanoherana ny fanonganam-panjakana
Les médias honduriens choisissent leur camp par france24
Misy sary tsy mety tafavoakako mihitsy eo fa tsindrio ny rohy voalohany fa mahaliana dia mahaliana.
Ny tsy nananan'ny tolona teto Madagasikara dia ny fanaovana rindran-kiram-panoherana tahaka izao nefa dia nisy kosa tany Honduras.
Ity ary ny tonon'ny hira fanevan'ny tolona tany Honduras
Fanamarihana: Tsy mahay teny epaniola na ny pitiny aza i Jentilisa fa ny google translate no mba ampiasainy sy izestiavany eo. Dia mirary soa ho an'ny reny rehetra nahatratra ny fetiny ihany koa ny mpanoratra!
Haleloia Mahaleo hiraina vazaha
2011-05-26 @ 11:26 in Ankapobeny
Dia misy tokoa ny mahita raha, raha "La Marseillaise" nohiraina gasy no naseho anao farany dia ny Haleloia Malagasy hiraina any am-piangonan'ny vazaha indray ity manaraka ity. Nahafinaritra an-dry zareo ilay izy ary nataony hoe Haleloia Malagasy ny anarany.
Hirampirenena vahiny sy manaova sonia
2011-05-23 @ 16:34 in Ankapobeny
Malagasy any ambanimbanivohitra any mihira ilay hiram-pirenena
Atao hoe tanora miala voly maka tahaka ilay Malagasy angamba
Tena lasa vanim-potoana mialoha mihitsy ilay mpamorona na efa naheno Rock
Hoy ilay Senegaley tsy nahazo visa izay hoe: "Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire est terminé". Na izany na tsy izany mety ho avy indray ny fotoana mianatra ity hiram-pirenena vahiny indray ny Malagasy mpianatra rehetra.
Tena mihamisetrasetra ihany ilay hira ka nanjary toetra ve avy eo? Vita tompoko!
Izany hoe mivadika zavatra hafa ity. Mety ho falifaly ianao mihaino sy mijery ny ataon'ireo olona ireo ary voatery nanongilana ny tarehy mihitsy aza tamin'ny voalohany. Fa eo amin'ny toe-draharaham-pirenena dia ilaina ihany ny fanangonan-tsonia indraindray na mpanohitra na mpanohana azy ianao, raha tena demokraty tokoa. Asaina ianao hanao sonia hahazoana olona mizaka zom-pirenena Malagasy iray hirotsaka hofidiana ijerena raha naloambahoaka tokoa izy na ny mifanohitra amin'izay, izany hoe mamim-bahoaka. Izaho mahita fa tsy voatery ny mpanohana azy no manao sonia fa ny mpanohitra azy ihany koa ka te-hahita marina izay ironan'ny mpifidy rehetra. Tsindrio ary ny rohy dia ataovy ny sonia ho an'izay sahy miseho anarana. Marihana fa mila hamarinina any amin'ny adiresy imailakao ny "sonianao" izay fanindriana bokotra fotsiny.
Na SADC na inona isika ihany no tompon'ny vahaolana
2011-05-22 @ 22:29 in Politika
Mialoha ny ilazana izay tiana ampitaina dia tiako aloha ny mizara aminareo, any ampitan-dranomasina sy any amin'ny faritany tsy mahita na tsy mahara-baovao nefa afa-mijery aterineto, televiziona malagasy telo mety ahitanareo sombin'ny toe-draharaha misy eto an-tanindrazana sy ahafahanareo mampitaha izay tsy avoakan'ny haino aman-jery mahazatra nefa hitantsika aty amin'ny aterineto sy ny vaovao mety tsy resahina amin'ny aterineto nefa hitanareo ao amin'izy ireo. Ataoko fa tombony lehibe ho anareo te-hanaraka ny zava-misy eto Madagasikara ny hanarahanao azy ireo.
Ny roa voalohany araka ny fahalalako azy dia ny mpanjifa ao amin'ny moov.mg ihany no mahazo azy mivantana sy maimai-poana. Ny hafa kosa tsy mazava amiko loatra fa mila mifanoratra amin'ny tompon'io tranonkala io angamba sady misy sara aloa vao mahazo azy mivantana, raha tonga moa ianareo dia tafiditra avy hatrany dia arahaba soa arahaba tsara. Ny voalohany moa dia ny televizionam-panjakana araka ny mahazatra ihany: ny TVM. Na dia eo aza ny mety ho lesoka lehibe amin'ny fanasohasoana ny mpitondra dia ilaina ihany ny mahafantatra ny vaovao aely manerana an'i Madagasikara sy ny azo heverina ho fantatry ny rehetra eto Madagasikara ary azo refesina avy amin'izany ny vaovao omena ny vahoaka Malagasy.
Ny faharoa kosa izay sintonina avy ao amin'ny hihy Live ao amin'ny moov.mg ihany dia ny Matv izay televiziona tsy miankina sy manana fandaharam-baovao maro ihany koa. Saiky hita ao avokoa ny fanehoan-kevitry ny ankolafy politika te-hiresaka sy te-ho hitan'ny olona fa tsy voatery hoe ny ankolafy iray ihany no hibahan-toerana ao. Amin'ny ankapobeny dia eto Antananarivo sy amin'ny aterineto atoro anao io ihany no ahitana azy ka anjaranao ny manaraka raha tia hahalala vaovao misimisy eto Madagasikara ianao. Somary mahavariana ahy fotsiny raha tena mivantana ny Matv ao fa isak'izay mijery aho dia vaovao hatrany no hitako, nefa hisy tahaka izany indray moa ve raha izay tokoa no izy? Manana rohy hafa azo jerena ihany ny Matv ary ahitana hihy [onglet] isan-karazany ao aminy.
Ny fahatelo izay atoro anao kosa dia tsy ao amin'io vohikala io no ijerena azy sady tonga dia tafiditra maimai-poana ianao: Tv Plus Madagascar izany. Aleo kosa aloha lazaina fa tsy mivantana kosa ny vaovao hitanao ao fa tratra aoriana kely saingy raha miandry fatratra izay mety hahaliana anao ianao dia ny fanarahanao ny kaonty twitter-ny ihany no tsotra indrindra. Ny tombony betsaka dia azonao jerena amin'ny fotoana rehetra ny vaovao sy ny fandaharana heverin'ity haino aman-jery ity ho mahaliana ny besinimaro. Azonao iverenana avokoa noho izany ny fandaharana rehetra naraikiny ho an'ny aterineto ary mety ho gaga ny olona eto an-tanindrazana fa tahaka ireny hoe eto ihany ianao na dia any ampitan-dranomasina lavitra any aza.
Izay no ela fa hiditra amin'izay tiako ambara momba ny toe-draharaham-pirenena amin'izay aho. Tsy hiresaka na hitabataba momba izay fanekena nataon'ny SADC ny tondrozotra Siamo na tsia intsony aho fa efa maro izay namoaka ny vaovao sy ny heviny izay. Raha nisy ny olona tafaresaka tamiko mialoha ny fivoriana manokana nataon'ny SADC dia nanambara mazava aho fa tsy afa-manapa-kevitra avy hatrany ny momba an'i Madagasikara io fikambanam-paritra io fa anjaran'ny eto an-toerana ihany ny mandroso hevitra amin'ny hitantanana an'i Madagasikara fa anjaran-dry zareo fotsiny ny mijery raha niarahan'ny daholobe ilay fanapahan-kevitra na maro ny vondrona mahasolo-tena nanapa-kevitra taminy na tondrozotran'olo-tokana na firehana tokana no natolotra. Raha ny zavamisy ankehitriny anefa dia tsy ho tanteraka na oviana na oviana izany karazana marimaritra iraisana izany raha ny mpanao politika avy amin'ny ankolafy rehetra no andrasana.
Efa nohazavaiko tamin'ny fomba hafa ihany fa tsy tokony avela irery ho an'ny mpanao politika intsony ity raharaha ity fa lasa ny adi-seza hatrany no manjaka. Tsara mandray andraikitra avokoa ny rehetra fa raha mbola mialangalana isika dia hitarazoka io ka ho tafahitsoka tanteraka ny firenena... na voatery hanaiky ny tondrozotra mipetraka farany ilay fikambanana dia izay izany no izy. Manana tombony lehibe amin'io fotoana io izay efa nametraka fa hotontosaina mialoha ny faran'ity taona ity ny fifidianana antenimiera sy filoham-pirenena. Raha jerena amin'izao fotsiny dia ny fifidianana tokoa no marika maha-demokraty ny firenena iray na tsia saingy ny mangarahara ao anatiny no mametraka olana lehibe sy tsy maharisika loatra.
Noho izany: soso-kevitra ny ahy hoe tsara ny mitady vondron-kery eto an-toerana, tsy avy amin'ny mpanao politika, hanao vovonana na fivoriana itambaram-be hanolotra tondrozotra iray matanjaka sy maharesy lahatra ny fiaraha-monina iraisampirenena. Tondrozotra mametraka ny vahaolana ialana amin'ny krizy tokoa ary lalana mizotra mankamin'ny fifidianana madio sy mangarahara izay vavahady lehibe ivoahana amin'ny krizy. Ilaina ny rafitra manatontosa ny fampihavanam-pirenena izay iniana tsy lazaina intsony amin'izao fotoana izao ary vita izany vao tontosaina ny fifidianana. Rafitra tsy azo tsinontsinoavina ihany koa ny Vaomieram-pirenena momba ny fifidianana ka ao no iray amin'ny tokony hanana tetibola matanjaka indrindra. Aleo aloha faranana hatreo fa mety ho be ny hilaza fa revin-gadra ny an-tena nefa aleo nolazaina ihany na dia tsy mahafapo ahy izay manoratra azy ihany koa aza izay efa voasoratra fa mbola eo am-pierirteretana lalina.
Jentilisa, 23 mey 2011 amin'ny 00:30
Tolona mba hankaiza?
2011-05-18 @ 22:45 in Politika
Tsotra ny resaka! Mila olona toa an'i Malcom X izao miaraka amin'ny fifandaminana matanjaka fa tsy tokony hanaiky vokisana rivotra fotsiny. Raha tsy izay tsy hisy dikany izay fidinana an-dalambe. Ny toy izany no nampahery vaika ny 2009 na dia mpifanohitra tamin'ny hevitro aza ry zareo. Averina eto ihany koa ny tsikaritra etsy sy eroa mety ho tsy hitanareo!
MALCOM X REFOULE A L’AÉROPORT FRANÇAIS 1965 par SOUMIS--INSOUMIS
Tsy mety tafa ilay sary fa tsindrio ny rohy voalohany...
Mbola hiresaka politika ihany ve?
2011-05-15 @ 23:45 in Politika
Raha nisy ny olona nilaza azy ho tsy leo politika dia tsy manaiky lembenana ny aty ary azo heverina ho karazany nahavery ny maro tamin'ny mpamakiko fahiny aza izany nironako tamin'ny politika izany. Ankehitriny asa raha mbola hanana fahazotoana ho amin'izany aho na tsia. Tsia, tsy mety leo politika aho fa tsy te-hiresaka izany an-tserasera intsony. Kamo aho ny hanohy hanoratra momba izany hatrany. Izay angamba no tsy nanoratako fotoana lavalava izay ankoatra ny fahasahiranana ahy manokana.
Nosoratako tamin'ny lahatsoratra teo aloha fa misy ny zavatra saiky havoakako dia niova lohahevitra vetivety aho. Manahy ankehitriny fa mety tsy ho tafaverina hanoratra izany intsony ny tena. Nahoana? Herinandro vitsivitsy lasa izay dia nisy olona fanta-daza niantso ny tena mba hanaitra ny mpamaham-bolongana malagasy hanana anjara biriky amin'ny famahana ny olana mangeja ny firenena ankehitriny. Nantsoina ny mpamaham-bolongana satria manana tambajotra matanjaka afaka manaparitaka ny vaovao ao anatin'ny fotoana fohy. Tsy avela hogejain'ny mpanao politika avy amin'ny ankolafy rehetra misy intsony ny fiainam-pirenena fa mba manana ny lanjany ihany koa ny firaisa-monim-pirenena. Nampitaiko tamin'ny namana rehetra izany filazana izany ka indroa aho no namonjy ny fivoriana fanomanana. Tsy afaka intsony ny andro manaraka noho ny antony manokana.
Niezaka ny nandresy lahatra ny hafa rehetra tany ambadimbadika tany ny tena, fa nihatakataka avokoa ny rehetra. Na dia niantso hatrany aza ny tao amin'ny komity mpanomana ilay fivoriambe hamoahan'ny firaisa-monim-pirenena ny fivondronany tsy anavahana fironana ary na namerimberina ny antso hatrany tamin'ny hafa aza aho dia antso an'efitra avokoa izany. Niantso olona manokana aza aho hisolo tena ahy amin'ny fotoana rehetra tsy ahafahako saingy herim-po very maina izany. Mbola variana amin'ny TEDxTNR koa angaha, sady iny tsy miresaka politika loatra dia aleo tsy midikiditra amin'ny resaka fiainam-pirenena.
Ankehitriny, izaho manokana dia tena menatra tokoa. Nandraraka ilo mby an-doha manko, nomena avara-patana kanefa tsy nahay nandray ny voninahitra natolotra ny tena sy ny tontolom-bolongana. Nantsoina, fa nandà. Tsy hitako loatra izay itabatabana politika amin'ny sehatra toy itony raha antsoina mba ho "mpitsara" no mandositra. Tokony ho tonga saina ihany ny hafa raha misy mpamaham-bolongana politika sady mpanao gazety miharihary fironana no manao fampitandremana fandrao tratran'ny "manipulation" ny bilaogera ary faly ery rehefa mahita mpamaham-bolongana manoratra fa tsy te-hiditra "resaka politika". Isika toa mba manan-kevitra ery rehefa manoratra saingy rehefa tonga ny tokoa, mbola miafina hatrany. Eny mety hoe sao fandrika tokoa angaha ka aleo tsy mipoitra hatrany saingy tsy maintsy hotsarain'ny tantara avokoa isika rehetra.
Mbola hanana fahazotoana hiresaka politika ve aho? tsy haiko intsony! averiko indray fa tsy leo aho raha resaka politika fa lasa kamo aho ankehitriny raha mbola hilazalaza izay hevitro amin'izao. Dia nanjary nipololotra ho azy ilay tononkalo nanana ny lazany nosoratan'i Rado manao hoe Boboka aho ry Tanindrazako. Aleo aho angamba hiala sasatra amin'izay raha resaka politika satria tsy mahatarika olona handray andraikitra eo anivon'ny fiainam-pirenena akory :)
Jentilisa 16 mey 2011 amin'ny 01:45
Ps: raha ilay resaka moov madagascar sy ny bilaogera dia azonao jerena ato ny tohiny.
Fandrahonana sy Fanekena?
2011-05-01 @ 12:12 in Ankapobeny
Feno 80 taona tamin'ny 29 Aprily lasa teo ny Radio Nasionaly Malagasy rehefa nanomboka tamin'ny anarana hoe Radio Tananarive ka nampiely ny feo hatreo Antaninarenina, nandalo ny Radio Madagasikara ary efa nisy fotoana nanana ny fitaovana raitra indrindra teo amin'ny faritra Osena Indiana saingy noho ny sotasotan'ny sasany moa dia miveriina ho tsizarizary fitaovana indray amin'izao fotoana izao. Tsy mazava amiko tsara intsony moa hoe iza marina no tena anarany amin'izao ora anoratana izao fa apetrako ho Radio Nasionaly Malagasy na RNM aloha. Miarahaba azy indrindra nahatratra izany tsingerin-taona izany na dia mbola tsy tafarina tsara indray aza.
Ny mampalahelo anefa dia tamin'io fotoana io indrindra no nilazana fa harahi-maso akaiky ny famoaham-baovao an-tserasera Malagasy. Tsy mazava hatreto hoe hampidiriny ao anatin'izany ve ny bolongana sahala amin'itony na dia an'olo-tsotra aza sa manakory tsara. Raha miteny ny hoe hanara-maso manko dia tsy toy ny zavatra tsara no ilazany azy fa toy ny fandrahonana anay izay niezaka hatrany ny nampahalala izay niniana na nosakanana tsy nampahalalaina tamin'ny alalan'ny haino aman-jery mahazatra. Inona tokoa no tena anton'ny filazana? Noho ny fanisana indray ny isan'ny mpanao gazety ve ka horarana tsy mahazo mamoaka vaovao intsony izay tsy mahazo karatra? Fandrao dia tiana hosamborina satria 'piraty' izay hafa mbola mamoaka vaovao avy eo ve? Toa fanekena ihany izany, amiko, fa nanana anjara toerana lehibe ny aterineto tao anatin'ny roa taona ka tiana hofehezina nefa fandikana ny fahalalahana haneho hevitra izany, afa-tsy hoe tsy voasoratra ao anaty Lalampanorenana intsony angamba io fahalalaham-pitenenana io.
Mifanindran-dalana amin'izany koa anefa dia misy ny fikambanana na sehatra ivondronan'ny Fikambanana te-hametraka ny anjara toeran'ny mpamaham-bolongana eo anivon'ny fiaraha-monina sy ny fahafahana manapa-kevitra anivon'ny Firaisa-monim-pirenena. Tsorina fa tsy tena mahalala tsara ny momba ny bolongana na bilaogy ry zareo saingy mba te-hahafantatra bebe kokoa. Na tiana na tsy tiana noho izany dia hiditra dingana vaovao ny tontolom-bolongana malagasy mpiresaka fiainam-pirenena. Noho ny fotoana dia tsy afa-namelatra loatra momba ity lazaiko ity aho nefa iriako ho voazavako tsy ho ela ny momba io.
Jentilisa, 01 mey 2011 amin'ny 14:10